Mogadishu Journal » 2018 » January » 22
Mjournal :-Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dagaalamay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Suuqa ku yaalla degmada Kaaraan. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamadan oo ku labisnaa dharka ciidamada ayaa isku rasaaseeyay gudaha Suuqa Kaaraan, warar kala duwan ayaa...
Ra’iisal wasaare Kheyre oo u anbabaxya dalka Switzerland
Mjournal :-Wafdi Ballaaran oo uu hoggaaminaayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta u dhoofay magaalada Geneva ee Caasimadda dalka Switzerland. Kheyre ayaa halkaasi kaga qeyb gali doona shirka dhaqaalaha adduunka. Waxaa lagu Waddaa in uu halkaasi kulamo...
Xog ku saabsan isku shaandheynta golaha Wasiirada
Mjournal :-Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Dhawaan Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre uu isku shaandheyn ku sameyn doono golahiisa wasiirada. Warbaahinta ayaa ogaatay in Wasaaradda Warfaafinta lagu wado in loo dhiibo Wasiirka Wasaaradda...
Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda degmada Hobyo
Mjournal : – Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo xalay ilaa shalay ku sugnaa magaalada Caabud-waaq ee G/Galgaduud ayaa maanta lagu wadaa inuu tago Magaalda Hobyo. Madaxweynaha ayaa lagu waramayaa in marka uu gaaro Hobyo in uu dhagaxdhigi doono...
Muuse Biixi oo ku baaqay in la Joojiyo Colaada ka taagan Gobalka Sanaag
Mjournal :-Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Baaq Nabadeed U Diray Beelaha Dagaalku Ku Dhexmaray Degaanka Ceel-afweyn Ee Gobolka Sanaag Gaar Ahaan Degmada Darar-weyne. Madaxweynaha Somaliland, ayaa baaqaasi ku yiri “Waxa aan ugu baaqayaa beelaha ku...
At least 17 people have been killed in inter-clan clashes at Dararweyne village in El-Afweyne district of Sanaag region. The fighting which is the latest in a series of backlashes between rival clans, which began on Sunday morning reportedly lulled in the evening. Abdullahi...
Mjournal :-Xarunta Gobolka Banaadir ee dowladda hoose, ayaa wali waxaa ku sugan ciidamada Koofi guduuda ee ka amar qaata Madaxtooyadda Soomaaliya, kuwaasi oo shalay subax aroortii la wareegay xaruntan. Ciidan dheeraad ah oo wata gaadiidka dagaalka ayaa shalay lagu kordhiyay...
Ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa maalinimadii axadda adduunka oo dhan ka yaabsaday kadib markii uu muraayad isku eegay isaga oo ku dhex jira garoonka ciyaaraha, islamarkaasna ay socoto ciyaartii. Arrintan ayaa keentay hadal heynta in Ronaldo in uu yahay nin xarago jecel,...
Cali Maxamed Geeddi : Maqaamka gobolka Banaadir waa arin dastuuri ah
Mjournal :-Kadib khilaaf soo kala dhexgalay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sababtay in xilka laga qaado Thaabit Cabdi Maxamed oo ahaa Duqa Muqdisho. Khilaafka labadan masuul ayaa ka dhashay kadib markii Thaabit uu ku dhawaaqay shirka...
Eng Yariisoow iyo Taabit oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho
Mjournal :-Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yariisow) ayaa xlay xilli dambe hoygiisa ku booqday Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed. Guddoomiye Yariisow booqashadiisa waxaa ku wehlinayay Wasiirka...